‘ब्रा’ खोलेर टेलिभिजनको समाचार कहाँ पढिन्छ ? - Khabarsansar.com
‘ब्रा’ खोलेर टेलिभिजनको समाचार कहाँ पढिन्छ ?
काठमाडौं । अल्बानियाँकी समाचार वाचिका ग्रेटा होक्सा केही हेडलाइन पढ्छिन् । स्तनहरू सामान्य कपडाले ढाकेर उनले समाचार प्रस्तुत गरिरहेकी हुन्छिन् ।
२४ वर्षिया समाचार प्रस्तोता होक्सा फायर टेलिभिजनमा काम गर्छिन् । यो मिडियाले समाचारको प्रभावकारीताका लागि होक्सा जस्ता समाचार प्रस्तोता तयार पारेको छ ।
होक्सालाई पनि माथ खुवाउने अवस्थामा समाचार प्रस्तुत गर्छिन् २१ वर्षिया इन्की ब्राकाज । जसलाई प्लेब्वाई म्यागेजिनमा तस्बिर खिचाएपछि कम्पनीले निकालि दियो । अल्बानियाको यो टेलिभिजनका प्रमुखहरू प्रस्तोता टपलेस भएर आउँदा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाप्रति कत्ति पनि चिन्तित छैनन् ।